Dacwad dil oo lagu soo oogay Mohamed Noor, askarigii dilay Justine Ruszczyk
Jon Collins, Riham Feshir, Mukhtar M. Ibrahim, Brandt Williams MPR News [In English]
Mohamed Noor, oo askari ka ah Minneapolis, ayaa lagu soo oogay dacwad dil darajada saddexaad ah oo la xidhiidha toogashadii uu xagaagii hore ku dilay Justine Ruszczyk oo soo wacday 911.
Noor ayaa Talaadadii isdhiibay ka dib markii amar xadhig ah loo jaray, sida uu sheegay Xafiiska Hennepin County Sheriff. Noor waxaa lagu xidhay xabsiga Hennepin County. Noor wuxuu wajahayaa dacwad dil darajada saddexaad ah iyo sidoo kale dacwad dil aan ula kac ahayn oo darajada labaad ah.
Ma “jirin caddayn ah inuu askari Noor la kulmay wax khatar ah, qiimeeyay khatar… ama xaqiijiyay khatar qiil u yeeleeysay go’aankiisii ahaa inuu adeegsado awood dilaa ah,” ayuu Freeman Talaadadii ku yidhi warfidiyeenka. “Taa baddalkeed, wuxuu askari Noor si taxaddar la’aan ah oo ulakac ah u riday qorigiisii isagoo dilay Ruszczyk.
Sharciga Minnesota wuxuu bilayska siinayaa xorriyad balaadhan oo ay ku adeegsadaan awood dilaa ah marka ay ku jiraan xaalad ay ka baqaan in la dilo ama ay dad kale ku jiraan halis. Freeman, hase yeeshee, wuxuu sheegay inuu Noor “ku xadgudbay awoodiisii isticmaalka xoogga dilaaga ah.”
Freeman wuxuu sidoo kale wax ka sheegay askar Minneapolis ka tirsan oo aan la magacaabin kuwaas oo uu sheegay inaysan markii hore kala shaqeeyn baadhitaankiisii, taasoo sida uu sheegay ku kaliftay inuu abaabulo xeer-beeg isticmaalana awooddiisa baadhitaan.
Warbixin ay soo saareen qoyska Ruszczyk ayay ku taageereen go’aanka dacwad oogista:
“Ma jirto dacwad oogid noo soo celineeysa Justine. Hase ahaatee, caddaaladdu waxay amreeysaa la-xisaabtanka kuwa mas’uulka ka ah inay si taxaddar la’aan ah u dilaan muwaadiniinta loo dhaarshay inay ilaaliyaan, falka maanta ayaana muujinaya.”
by Sara Porter, MPR News 3/21/2018 7:11:14 PM